August 2016 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Than Toe Aung at 2:48:00 PM 0
ဒီ Fontchanger အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Root လိုအပ်ပါတယ် MIUI 8 လဲတင်ပြီး ပြီ Root လဲရပြီဆိုရင် ဒီ App လေးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ Zawgyi Font (၂၁) မျိုးနဲ့ Unicode Font (၃) တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်နေရာတိုင်းမြန်မာစာမှန်စေပါတယ် ဥပမာ Browser , သတင်းစုံ , Sing! Karaoke ect..
ကဲအောက်က Link မှာဒေါင်းလုပ်ကြရအောင် :D
Changelog : Fixed bold font
Change new method (Qualcomm)
- အခြား ဖုန်းတွေစမ်းမယ်ဆိုလည်းရပါတယ် Android 4.4.2 , 4.4.4 , 5.0x .5.1.1 , 6.0.1 တွေထိရပါတယ်
DL @ http://www.mediafire.com/?kbdmf6u1g9of68n
Like us @ https://www.facebook.com/miui8fontchanger/
Min Oaker at 11:28:00 AM 0
ပုသိမ်နည်းပညာ at 10:47:00 AM 0
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:41:00 AM 0
အခြား လုံခြုံရေး products ကဲ့သို့ မိမိတို့၏ PC ကွန်ပျူတာ နှေး ခြင်းမရှိစေဘဲ မြန်ဆန်သွတ်လက်မှုကို ကောင်းမွန်စေမှာပါ antivirus နှင့် antispyware ကာကွယ်မှု ကိုပါ တိတ်တဆိတ် နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်ပေးမဲ့ PC ကိုရည်ရွယ်ပြီး optimization tools တွေပါဝင်ဖွဲစည်းပေးထား တဲ့ PC For Cleaner ကောင်းတစ်မျိုးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။သုံးဖူးတဲ့ သူတွေရှိသလို မသုံးရသေတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ မိမိတို့ PC မှာ အမှားဖြစ်နေရင်တောင်မှ Fix လုံခြုံစွာနဲ့ Windows registry ကို စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် မမှန်ကန်ကြောင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုတော့တဲ့ information အချက်အလက် ကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ၏ Windows registry ပျောက်ဆုံးနေခြင်းမှ အချက်အလက်များ ၊မှားယွင်းမှု ကိုပြုပြင်တာတွေ မိမိတို့ system ကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင် run တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကွန်ပျူကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာလေးလံမှုများအတွက်လည်း Speed Up to 300% ထိ Faster PC ကိုမြန်ဆန်ပေါ့ပါးစေပါတယ်။တစ်ခြားလုပ်ဆာင်ချက်တွေနဲ့ပါဝင် ပတ်သက်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေကို အောက်မှာတပါတည်း တွေ့ကြရမှာပါ။ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32bit/64bit) အတွက် Supports ပေးထားကြောင့် Full ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့် ဆီးရီးကီးပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကနေဝင်ရောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
PC Cleaner Pro 2016 Serial Key;
==>>How To Activate<<==
ဖုန်းမှာတင် Video edit တွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - KineMaster – Pro Video Editor v3.5.0 Apk
ပုသိမ်နည်းပညာ at 10:38:00 AM 0
ဖုန်းမှာတင် Video edit တွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - KineMaster – Pro Video Editor v3.5.0 Apk ကောင်းလေးပါ ဖုန်းမှာတင် ကိုယ်ပိုင် editing ပြုလုပ်နိုင်လို့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် App လေးပါ အောက်မှာဒေါင်းပါ အဆင်ပြေပါစေ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
KineMaster – Pro Video Editor v3.5.0 Apk | 15 MB | Resumable Links
– individual L/R audio channel panning (can be used to adjust audio balance, convert to mono, swap, L/R channels, etc) Added
– audio pitch control Added
– Added audio compressor filter
– When recordingavideo, it can be added asalayer
Video, images, music, text and even instantly recorded video and audio can all easily be added.
During editing video, use audio tracks atatime in addition to the audio track built in with each theme.
Handwriting, stickers, and changing the font style are other ways to individualizeaproject.
The project in progress will continuously be saved automatically and can be re-edited at any time.
Exporting in resolutions up until 1080p (Full HD) is supported.
Easy SNS sharing as well as direct uploading to Cloud is supported.
Available for Samsung Galaxy S3 / S4 / Note2/ Note 3, LG Optimus G / Optimus G Pro / G2, Sharp SH-01F, Nexus4/ Nexus5(Continuously added
Selfie ကင်မရာဆော့ဝဲကောင်းလေး - CR7Selfie v1.0.1 Apk
ပုသိမ်နည်းပညာ at 10:32:00 AM 0
Selfie ကင်မရာဆော့ဝဲကောင်းလေး - CR7Selfie v1.0.1 Apk ကောင်းလေးပါဗျာ ဗားရှင်း အသစ်ထွက်လေးမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အဆင်ပြေပါစေ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
CR7Selfie v1.0.1 Apk | 89 MB | Resumable Links | Requires :Android 5.0 and up |
Save the selfie or Share it to your friends (social networks, mail, message and many other).
Copy ‘com.sevenwindows.cr7selfie’ Folder to sdcard/Android/obb
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:45:00 PM 0
ကဲ ကဲ.. ၁၈ ချစ်ညီကိုယ်တွေအတွက်အကြိုက်အမောပြေစေမဲ့ Adult, Drama, Semi, 18+ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဘဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုးရီးယားဇာတ်ကားကောင်းကြည့်ချင်သူတွေ
အတွက်၁၈နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။မူဗီအရည်သွေး HD အကြည် နဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ် 192.1Mb သာရှိပါတယ်။ ဇာတ်ကားအချိန်ကတော့ 60 မိနစ် ခန့်သာရှိပြီး Format က Mp4ပါ။
အောက်မှာတိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဒေါင်းရန် အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
iOS 9.3.5 IPSW Direct Link for All
Maung Pauk at 8:22:00 PM 0
Download Links of iOS 9.3.5 IPSW Files
Love Affair A Secret Affair (2016)18+HD ရုပ်သံ/အကြည်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:37:00 PM 0
Adult, Drama, Romance, Semi, 18+, ဇာတ်ကားအမျိုးအစားပါ။ကိုးရီးယားဇာတ်ကားကောင်းကြည့်ချင်သူတွေ
အတွက်၁၈နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသား Goo Min-ji နှင့် မင်းသမီး Kim Do-hee မင်းသမီးချေားလေးတို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါဗျာ။
ဒါရိုက်တာ- Lee Jae-sang ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း Pcloud လင့်ကောင်း၂နဲ့
မူဗီအရည်သွေး HD အကြည် တင် ဖိုင်ဆိုဒ် 197.0Mb သာရှိပါတယ်။ ဇာတ်ကားအချိန်ကတော့
69 မိနစ် ခန့်သာရှိပြီး Format က Mp4 ပါ အောက်မှာတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဒေါင်းရန်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:36:00 PM 0
လိုက်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုရင်းနဲ့ မင်းသားနေရာရောက်ရှိလာတဲ့ အမေရိကန်မင်းသား Kane Kosugi နှင့် ဂျပန်မင်းသမီး Rinko Kikuchi နဲ့ Rila Fukushima မင်းသမီးချေားလေးနှစ်ဦးတို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:34:00 PM 0
အက်ရှင်၊အဖြစ်အပျက်၊ဒရာမာ၊စိတ်ကူး ဇာတ်ကားအမျိုးအစား ၂၀၁၆ အသစ်ထွက်ဇာတ်ကားကောင်းအသစ်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် ဒီနေ့ညအတွက်တင်ဆက်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိက မင်းသား Sharlto Copley နှင့် အမေရိကန် မင်းသား-Tim Roth ပါဝင်ထားပြီး၊ အမေရိကန်မင်းသမီး Haley Bennett တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
ဒီ ရုပ်ရှင်ကို wild-rides to hit the big screen မှာ original အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားပါ ။သင် သိပါသလား?အဘယ်အရာကိုမျှ မအောက်မေ့ဘဲ အဘယ်သူကမျှ မှတ်ဉာဏ် နှင့်အတူ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာမယုံနိုင်သလောက်ပါဘဲ ဟင်နရီ ၏ မျက်စိ ကနေ ပထမဦးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး မြင်တွေ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင် ပါ ။ သူကသူ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခြင်းနှင့် ဇီဝ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါ။စစ်သား တစ်ဦး အစီအစဉ် နှင့်အတူ စစ်ဘုရင် ကနေ သူ့ဇနီး ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ရောင်ပြန်လေး at 2:43:00 PM 0
မိတ်ဆွေတို့ Mobile Phone တွေပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်
မက်မောလှသော၊Photo၊ သီချင်းနဲ့ အခြားသောအရာတွေကိုပါဆုံရှုံးလိုက်ကြရတယ်
Google ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Parsonal File တွေလုံခြုံဖို့အတွက်Service တော်တော်များများ
အဲ့စကားကြုံလိုဖြတ်ပြောလိုက်ဦးမယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဟာ Gmail အကောင့်
ကျွန်တော်တို့ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဗျာ။Zapya လို Xander လို Transfer လုပ်နိုင်တဲ့ Device
တွေကနေကူးယူတယ်ဗျာ၊Video တွေ ဓါတ်ပုံတွေကို
ဆိုတဲ့နေရာမှာ Gmail အကောင့်ရှိယုံနဲ့အခမဲ့သိမ်းထားနိုင်မယ်ဗျာ
ဟုတ်ပြီဓါတ်ပုံနဲ့ Video တွေတော့သိမ်းပြီးပြီ
အခြား Parsonal File တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းမလဲ
မှာသိမ်းမယ်ဗျာ။သူလဲGoogle Product ပဲလေ Gmail အကောင့်ရှိယုံနဲ့အခမဲ့သုံးနိုင်တယ်
ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာပါပြီ။သူက storage ဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲ။
ဟုတ်ကဲ့ Google ကသူ့ Product အားလုံးအတွက် 15Gb တိတိပေးထားပါတယ်
ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေဆို App အနေနဲ့တောင်ပါတတ်တယ်
အစရှိတဲ့Free Cloud တွေမှာလည်း Gmail အကောင့်တစ်ခုရှိယုံနဲ့အခမဲ့သိမ်းထားနိုင်ပါသေးတယ်
ကြုံလို့ Gmail နဲ့ပဲ Free Cloud တွေကိုသုံးခိုင်းတာပါ။
ဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့ ဖိုင်တွေ၊ဓါတ်ပုံတွေ ၊ Video တွေသိမ်းထားတာ
ရတယ်။အခုပြေသွားတာတွေကိုသုံးတဲ့ Browser တွေကို App Lock လိုမျိုး၊ Voault လိုမျိုးတွေနဲ့
မိမိသုံးတဲ့ Social app တွေပါခတ်မယ်။
ပြီးတော့Color Note သုံးမယ်ဗျာ။
Color Note ထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ Social Account ရဲ့ Mail & Password မှတ်ထားမယ်။
Social Account ကို App Lock ခံထားတဲ့အတွက် ဖွင့်မရဖြစ်မယ်ဗျာ။
ခင်ဗျာကတော့အခြားဖုန်းတစ်လုံးမှာ Color Note ထည့်မယ်။Gmailနဲ့ Log In ၀င်မယ်
အရင်ဖုန်းထဲမှာပါသွားတဲ့Social Account တွေရဲ့ Mailနဲ့ Pass ကိုပြန်ရပြီး ဖုန်းအသစ်မှာအသုံးပြု
နိုင်ပြီပေါ့။ပြီးတော့အပေါ်မှာပြောသလိုData တွေကိုသိမ်းခဲ့တဲ့ အတွက် ဖုန်းဆုံးရှုံးသွားတာက
လွဲရင်ကျန်တာအားလုံးပြန်ရနိုင်ပါတယ်။အေးဆေးပဲပေါ့။ ငိ ငိ